Tag: pdf ka Okwu | Martech Zone
Tag: pdf ka Okwu
Mgbe ụfọdụ, ọ bụghị nnukwu, nnukwu ọrụ, usoro mgbagwoju anya na-eme ụbọchị gị. Taa, anyị natara ụfọdụ mpempe akwụkwọ site n'aka onye mmebe anyị nke nwere ọmarịcha mana ha dị 12Mb mgbe m gbanwere ha na PDF. N'ikwu eziokwu, enweghị m ntụpọ banyere mkpakọ PDF ka m wee gaa Googled maka ezigbo ntọala na nkuzi. Ihe m huru bu mkpuru - smallpdf. Echefu ntọala, chefuo nkuzi s naanị ịdọrọ na dobe faịlụ PDF gị na ya